သွားဘက်ဆိုင်ရာ Orthers စက်ရုံ | China Dental Orthers ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
နှစ်ဆတံခါး UV ပိုးသတ်စက်ကက်ဘိနက်ခံတွင်းသုံးကိရိယာများပိုးသတ်စက်သည်အိုဇုန်းနှင့်အချိန်ကိုက်ခြင်း
ဤထုတ်ကုန်သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးပိုးသတ်ဆေးပိုးသတ်ထားသောပိုးသတ်ခြင်း၊ ဖန်၊ သတ္တု၊ ပလပ်စတစ်ကိရိယာများပေါ်တွင်ဘက်တီးရီးယားများကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီးကိရိယာအတွက်ပိုးသတ်ထားသောသိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
dental c-fill obturation system dental dental endodontic brushless LED လျှပ်စစ်သွားဘက်ဆိုင်ရာ obturation system
၁။ ကြိုးမဲ့ဒီဇိုင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချပါ
၃။ Heat plunger သည်လွယ်ကူသောသော့ခတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်
5. လျင်မြန်သောအပူ။ အမြန်လည်ပတ်မှု
6. ကြီးမားသောစွမ်းရည်ဘက်ထရီ။ ဘက်ထရီနှစ်ဆအားသွင်းခြင်းနှင့်အားလပ်ချိန်မှာ
root cannal wireless dental obturation system obturator dental အတွက် root medical cannival pen အပြည့်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းဇစ်မြစ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားဘက်ဆိုင်ရာသွားဘက်ဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းစနစ်ပါဝါအရင်းအမြစ်: လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်း ၀ ယ်မှုဝန်ဆောင်မှု။ အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း: သံ၊ ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိသက်တမ်း: ...
hot sale dental instrument gutta percha dental obturation system dental root canal filling obturation system
dental gutta percha obturation pen သည်သွားဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ gutta percha obturation system ဖြစ်သည်
သွားဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖြူရောင် obturation pen နှင့် gun materiales dentales ထုတ်ကုန်များကိုသွားဆရာဝန်အတွက်ထုတ်လုပ်သည်
endodontic obturation system သွားဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း obturation pen gutta percha ဖြည့် obturation system
သွားဘက်ဆိုင်ရာသတ္တု uv ပိုးသတ်စက်သည်တံခါးတစ်ခုတည်းမှအရည်အသွေးမြင့် uv မီးချောင်းပိုးသတ်စက်အိုဇုန်းတစ်ခုတည်းတံခါး
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ မူရင်း၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: တစ်အိမ်တည်း uv ပိုးသတ်စက်ပါဝါအရင်းအမြစ်၊ လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်း ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း: သတ္တု၊ ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိ၊
စျေးနှုန်းသက်သာသော UV ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအိုဇုန်းနှင့်စျေး ၀ င်ခန်းသုံးသွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ
တစ်အိမ်တည်းသွားဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုတူရိယာ 220V လျှပ်စစ်စက်နှင့်လူကြိုက်များသောသွားဖုံး uv ပိုးသတ်စက်
သွားဘက်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်ချွေတာပိုးသတ်ခြင်းသွားတိုက် UV UV ပိုးသတ်စက်ဗီဒို ၂၇ L L ခံတွင်းတစ်အိမ်တည်း uv ပိုးသတ်စက်
သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး UV ပိုးသတ်စက်ဗီဒိုတစ်အိမ်တည်းစျေးနှုန်းကောင်းစျေးသွားဆေးရည် 27 L